Windows 10 အတွက်လိုအပ်တော့မည့် application ၁၀ ခု Gadget သတင်း
၁၀။ သင် Windows 10 တွင်တပ်ဆင်ရန်မလိုတော့သည့် application များ
Windows 8 သည် Microsoft ၏ operating system ၏လတ်တလောဗားရှင်းဖြစ်ပြီးလူအများအပြားကိုမကျေနပ်သောကွဲပြားသောရှုထောင့်များနှင့်အချက်များကြောင့်မကျေနပ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် Windows 8 မှာဘာတွေဆုံးရှုံးနေတာလဲသိလား။
အမှု၌သင်တို့မသိခဲ့ပါWindows 8 တွင် application အမြောက်အများထည့်သွင်းထားသည် Windows7နှင့်အခြားဗားရှင်းများတွင်အသုံးပြုသောကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်း (တပ်ဆင်ခြင်း) သည်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်အဆိုပြုထားသည့်အတိုင်းမလိုအပ်တော့ပေ။ ဤဆောင်းပါး၌သင်၏ operating system ပေါ်တွင်သင်တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်တော့သည့်ဤကိရိယာအချို့ကိုဖော်ပြပါမည်။
1 ၁။ Windows 1 မှာ Antivirus ထည့်သွင်းထားတယ်
3 ၃။ Partition မန်နေဂျာ
4 ၄။ ISO နှင့် IMG ပုံများကို Mount လုပ်ပါ
6 မျိုးစုံမော်နီတာများ 6. စီမံခန့်ခွဲမှု
7 ၇။ ကြီးမားသောဖိုင်များကိုကူးယူပါ
8 ၈။ PDF ဖိုင်ဖတ်သူ
9 ၉။ Virtual Machine များအတွက် Support
10 ၁၀။ System disk ပုံရိပ်
၁။ Windows 1 မှာ Antivirus ထည့်သွင်းထားတယ်
သင်တစ် ဦး ဦး စားပေးခဲ့လျှင် antivirus မျိုးတစ်မျိုးမျိုးကို install လုပ်ပါ ကြိုတင်ဗားရှင်း၌တည်၏ Windows ကို 8ယခုမှာသင်တို့အတွက်ဝမ်းမြောက်စရာသိတင်းကိုငါတို့ကြားရပြီ။ Windows Defender ဆိုသည်မှာ Microsoft မှတင်ပြသောကာကွယ်မှုဖြစ်သည် Windows7အတွက်နာမည်အောက်မှာရရှိနိုင်ပါတယ် Microsoft Security Essentials.
ဤအင်္ဂါရပ်ကို (တခါတရံတွင် add-on ၀ န်ဆောင်မှုအဖြစ်) တွင်ထည့်သွင်းထားသည် စျေးကွက်အပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးစနစ်များ; Windows XP SP2 မှ Firewall ကိုထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်တော့ပါ Windows ကို 8ဒီလည်ပတ်မှုစနစ်၏သတင်းအချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေးနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုအတွက်ဒီအင်္ဂါရပ်ကိုတိုးမြှင့်ထားတယ်။
၃။ Partition မန်နေဂျာ
Windows 8 မှာ, partition ကိုမန်နေဂျာအများကြီးတိုးတက်ခဲ့သည် အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည် ၄ ​​င်း၏ hard drive (သို့) partition တစ်ခုခုကိုအရွယ်အစားပြောင်းနိုင်သဖြင့်ဤကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအတွက် third-party applications များမလိုအပ်ပါ။
၄။ ISO နှင့် IMG ပုံများကို Mount လုပ်ပါ
သငျသညျရှိပါက Windows ကို 8 နောက်ပြီး ISO သို့မဟုတ် IMG disk image အချို့ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်လိုလျှင်၊ third-party tools များကိုတပ်ဆင်စရာမလိုတော့ဘဲ Microsoft ၏မူရင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ တစ် ဦး ဇာတိ function ကို။
ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို Windows7ကတည်းကအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး၊ CD-ROM (သို့) DVD တခုခုဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းအရာတွေကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ disk ထဲကိုကူးယူတဲ့အခါ third-party applications တွေကိုသုံးဖို့မလိုအပ်ဘူး။ မူရင်းကိရိယာသည်ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်သော discs များကိုပင်သုံးနိုင်သည်။ DVD disc တစ်ခုဖန်တီးရန်ဗီဒီယိုများသုံးနိုင်သည်၊ အခြား CD များအကြားအသံ CDD-ROM ဖြစ်သည်။
မျိုးစုံမော်နီတာများ 6. စီမံခန့်ခွဲမှု
ဤအခြေအနေသည်လူအများအတွက် (ကိုင်တွယ်မှုအရ) အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသော်လည်း2သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောမော်နီတာများကိုအသုံးပြုနိုင်သည် Windows ကို 8 ဇာတိ။ သက်ဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာ voila ကိုသက်ဝင်စေရုံသာဖြစ်သည် Windows ကို 8 ကျနော်တို့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်ဒါဟာမျိုးစုံမော်နီတာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ဘူး။
အရင်တုန်းကဒီစစ်ဆင်ရေးကို Windows7မှာ Teracopy လို့ခေါ်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ရသည်၊ ၎င်းသည်ကြီးမားသောဖိုင်များကိုနေရာတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ကူးယူသောအခါတွင်အဖြေဖြစ်သည်။
ယခု Windows ကို 8ဤကိရိယာ (သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အရာ) ကိုမဆိုအသုံးပြုရန်မလိုဘဲအသုံးပြုသူသည်၎င်းဖိုင်ကြီးများကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။
၈။ PDF ဖိုင်ဖတ်သူ
သံသယမရှိဘဲ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောအကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများနောက်တစ်ခုဖြစ်သည် Windows ကို 8; တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်တော့ပါ Adobe Acrobat သို့မဟုတ်အလားတူအခြားမည်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို PDF format နဲ့ဖတ်ပါဒီလည်ပတ်မှုစနစ်ကဒီပုံစံများကိုမူလပံ့ပိုးပေးတယ်။
၉။ Virtual Machine များအတွက် Support
အကြောင်းအရာသည်ကိုင်တွယ်ရန်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသော်လည်း Windows 8 မှာမူဖြစ်နိုင်သည် ကို virtual စက်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲ, ကျွန်တော်တို့ကို Microsoft အတွင်းရှိမည်သည့် operating system ကိုအတုယူရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုအင်္ဂါရပ်။
၁၀။ System disk ပုံရိပ်
Windows7မှာလိုပဲ Windows ကို 8.1 အသုံးပြုသူမှဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ် သင်၏ operating system disk တစ်ခုလုံး၏ပုံကိုဖန်တီးပါ; ဒီ feature ထဲမှာမရရှိနိုင်ကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ် Windows ကို 8.
ကျနော်တို့ရှင်းပြဖို့အချိန်အနည်းငယ်ယူကြပြီ ဒီ operating system ကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသောအရေးအပါဆုံးအင်္ဂါရပ်များ 10 မိုက်ကရိုဆော့ဖ်အနေဖြင့်ယခုထည့်သွင်းထားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာအချို့နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်တတိယပါတီအက်ပလီကေးရှင်းများတပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်တော့ကြောင်းပြောရန်ကြိုးစားသည့်အကြံပြုချက် Windows ကို 8.
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Smart Security: ESET လုံခြုံရေးစနစ်, အကောင်းဆုံးဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး 2012, TeraCopy - ကြီးမားသောဖိုင်များကိုလျင်မြန်စွာကူးယူပြီးကူးယူပါ။ Acrobat: စံသတ်မှတ်ချက်၏အဆင်ပြေမှု, Foxit PDF ကို Reader ကို။ Adobe Reader ကိုထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲ PDF extension ဖြင့်ဖိုင်များကိုမည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း, VHD virtual disk image ဆိုတာဘာလဲ။, Windows တွင် virtual disk တစ်ခုဖန်တီးခြင်းလွယ်ကူသောနည်းလမ်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » ၁၀။ သင် Windows 10 တွင်တပ်ဆင်ရန်မလိုတော့သည့် application များ
အင်တာနက် browser ရဲ့ privacy ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နည်း
Adobe Photoshop ဖြင့်ရုပ်ပုံများကိုမည်သို့ချဲ့ထွင်နိုင်သည်